INkomfa yeHlabathi ye-Stainless kunye ne-Expo eMasstricht, eNetherland
Besingenile ngempumelelo iNkomfa yeHlabathi ye-Stainless kunye ne-Expo eMasstrict, eNetherlands ukusuka nge-26 ukuya kwi-28 kaNovemba ngo-2019. Kwaye iimveliso zethu ziye zanconywa kakhulu ngaBathathi-nxaxheba kwihlabathi liphela.
Emva kohlaziyo lweminyaka engama-60 kunye nophuhliso olutsha, iCanton Fair iye yakwazi ukumelana nemiceli mngeni eyahlukeneyo kwaye ayizange iphazanyiswe. I-Canton Fair inyusa unxibelelwano kurhwebo phakathi kwe China kunye nehlabathi, ibonisa umfanekiso wase China kunye nempumelelo yophuhliso. Elona qonga lilungileyo lamaTshayina e ...
Ukucaciswa kweetyhubhu zentsimbi eziqhelekileyo ezingenanto ze-balustrade
I-38mm X 38mm ye-balustrade encinci, i-51mm X 51mm okanye i-63mm X i-63mm ye-balustrade enkulu, ubukhulu yi-1.5mm ukuya kwi-2.0mm
I-SS316 ii-steels ezingenasici zihlala zisetyenziselwa ukurhola kufakwe kufutshane namachibi okanye ulwandle. I-SS304 zezona zinto zixhaphakileyo ngaphakathi okanye ngaphandle. Njengamabanga asisiseko e-American AISI, umahluko phakathi kwe-304 okanye i-316 kunye ne-304L okanye i-316L ngumxholo wekhabhoni. Uluhlu lwekhabhoni ngama-0.08% ubuninzi ...
I-China yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle, ekwabizwa ngokuba yi "Canton Fair", isekwe kwi-1957. Iququzelelwe ngu-Mphathiswa Wezorhwebo we-PRC kunye noRhulumente waBantu wePhondo lase-Guangdong kwaye iququzelelwe liZiko lezoRhwebo lwaNgaphandle lase China, ibanjwa rhoqo entwasahlobo nasekwindla eGuangzhou, China. ICanton Fair ngu ...
I-17th China (Guangzhou) yoKwakha uMhlobiso woLwakhiwo lwaMazwe ngaMazwe
Abaququzeleli: IZiko lezoRhwebo lwaNgaphandle lase China (iQela) / Umbutho woKwakha uMnyhadala woKwakha wase China: I-China yoRhwebo lwaNgaphandle i-Guangzhou Exhibition General Corp. Isikali: I-380,000 ye-Meters Exhibitors: ngaphezulu kwe-2,400 Iindwendwe: malunga ne-140,000 yokuDibana neZiko lase China laseRhwebo lwaNgaphandle (iQela), elili-directdl. ..
I-10th South China insimbi kunye neMiboniso yentsimbi
Umququzeleli: Chengzhan Exhibition Service Co, Ltd. Qhakamshelana no: Mnu. Chu Idilesi: Igumbi 1008, Isakhiwo 1, Hengfu Isakhiwo seofisi yamanye amazwe, 11 Jihua Road, Isithili seChancheng, kwiSixeko sase Foshan, kwiPhondo lase Guangdong (PC: 528000) Unyaka entwasahlobo . Kwaye akukho xesha kufuneka lichithwe kwishishini lokuqonda ...
Zokubambelela, Plate yeSiseko seZandla, Nkqo Handrail izibiyeli, Stainless ilifti Handrail, Enyangweni Handrail isibiyeli, Stainless Handrail,